ရွာသဂျီးသို့ အကြံပေးစာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Letter to The Editor » ရွာသဂျီးသို့ အကြံပေးစာ
Posted by etone on Jun 17, 2011 in Letter to The Editor, Myanmar Gazette | 33 comments
လူ တဲ့ …ပခုံးနှစ်ဖက်ကြားမှာ ခေါင်းပေါက်တာချင်းတူပေမဲ့ ပေါက်ဖွားလာခဲ့တဲ့ မိသားစုမျိုးရိုး ကွာခြားလို့လား၊ နေထိုင်ရတဲ့ ပတ်ဝန်ကျင် အသိုင်းဝိုင်း မတူညီကြလို့ပဲလားမသိဘူး … မပြောတတ်ဘူး … စိတ်ဓါတ်တွေကလည်း နိမ့်မြင့်လတ် အစုံပါပဲ … ။ ရွှေပင်နားတော့ ရွှေကျေးဆိုပေမဲ့ …. ကျီးဟာကျီး ဒေါင်းဟာ ဒေါင်းပါပဲ … ။ ထုံးသုတ်လို့ မဖြုတဲ့ စိတ်ဓါတ်တွေနဲ့ လူအများ နေ့စဉ် ၀င်ထွက်နေတဲ့ ဒီရွာထဲမှာ အုတ်အေ်ာသောင်းနင်းဖြစ်အောင် လုပ်နေတဲ့လူတွေ ဘာလို့များ တနေ့တခြား များလာရတာလဲ … ။ အားမနာတမ်း ရှင်းရှင်း ပြောရလျှင် သဂျီးရဲ့ ရွာ အပေါ် care လုပ်နိုင်မှူ အားနည်းလာတာကြောင့်ပါ ။ ရွာထဲ ရေးနေရင်း ဇရှိတဲ့လူတွေ လည်းရှိမယ် … ၊ အေးဆေးသမားရှိမယ်… ဒီကြားထဲ အရေမရ အဖတ်မရ ပွိုင့်လိုချင်လို့ ရေးတဲ့လူရှိမယ် …၊၀ါသနာပါလို့ ရေးတဲ့လူရှိမယ် ….၊ ပျော်လို့ ၀င်လာတဲ့လူတွေရှိမယ်… ၊ဖရိုဖရဲ တဦးတယောက်ကို ရည်ရွယ်ရေးသားပြီး အရေမရ အဖတ်မရပို့စ်တွေရှိမယ် …စည်းကမ်းမလိုက်နာပဲ တနေ့ ၂ပုဒ်အထက် တင်တဲ့လူတွေ ရှိမယ် … ၊ ဒါတွေ တနေ့တခြား ဖောင်းပွလာတာဟာ သဂျီးက သေချာ မကိုင်တွယ်ခဲ့တာကြောင့်ပါပဲ … ။ အလကား ရွာဆူအောင် ထထဟောင်နေတဲ့ ငကြောင် များလည်း ဒီဆိုက်ထဲ မျက်စိကျနေပုံပါ… ။လက်တည့်စမ်းရေးချင်နေတဲ့ လူတွေကလည်း ပွိုင့်ရရှိရေး ဦးစားပေးရေးပြန်တယ်…. ဆိုက်ကို ပေါလစ်တင်ဖို့ မပြောနဲ့ … ကြာရင် ရှိရင်းစွဲ အခြေနေထက်တောင် ပိုဆိုးဦးမလား မသိတဲ့ အခြေနေမှာ ထိန်းသိမ်းမှု တစ်စုံတစ်ရာ ပြုသင့်နေပါပြီလို့ လည်း အကြံပေးပါတယ်… ။
ဟုတ်တယ်ညီမလေးရေ…. တစ်ခါတလေ သူများကို နှိပ်ကွက်ချင်တဲ့သူတွေကလည်း တစ်ယောက်ရေးတာနဲ့ ၀ိုင်းဖဲ့မယ်ဆိုတဲ့ သူတွေများလာတာ တွေ့ရတာပါပဲ။ နောက်တစ်ချက်က သူများဂုဏ်ချမှ ကိုယ့်ရဲ့ဂုဏ်တက်မယ်လို့ ထင်နေကြသလားဆိုတာပါပဲလေ။ ခုနောက်ပိုင်း ရွာထဲမှာ သိပ်မပျော်တာတော့ အမှန်ပါပဲ။
အဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာပေါ့ အစ်မရယ် ဆော်ချင်တဲ့လူကတော့ နှိပ်ကွတ်မလို့ စောင့်နေမှာပါပဲ
ဒီရွာထဲမှာ ဘာဂုဏ်တွေပြပြီး ၊ ဘာဂုဏ်တွေ ချချင်နေမှန်းလည်း မသိဘူးနော် ။ အရေမရ အဖက်မရ ဘာကို ထောင်လွှားနေမှန်းမသိဘူး အစ်မရဲ့ … ။ တစ်ခုတော့ရှိတယ်…
…ကိုယ်တိုင်ကလည်း အနေထိုင်တတ်ဦးမှ သူများပြောလို့မရမှာလေ…. ။ ကိုယ့်ဘက်က လုပ်နိုင်တာ ဒါပဲ ရှိတော့တာပေါ့ .. ။
သူကြီးလည်း မျက်စိရော နားရော ပိတ်ပြီး….တရားဘာဝနာတွေအားထုတ်နေသလားမသိ..။ဒါမှာမဟုတ် မျက်စိရောနားရော ဖွင့်ပြီး မမြင်ချင် မကြားချင်သရောင်ဆောင်နေသလားမသိ…။ တစ်ခုခုတော့တစ်ခုခုပဲ…။
ဟုတ်ပ etone ရေ ဒီလိုလူမျိုးတွေက ရွာထဲ အရမ်းများလာပြီ တစ်ခါတစ်လေ လိုင်းကမကောင်းတဲ့ကြားထဲ
အဲလိုပို့စ်မျိုး ဝင်ဖတ်မိရင် တကယ်ပဲ စိတ်ပျက်မိတယ် .
သူကြီးကိုအကြံမပေးနဲ့လေအမရာ ဦးဦးဖျားဖျာပေးရမှာ အကြံပေးတော့ဘယ်ကောင်းမှာလဲ
အခုတော့ esz88 တရွာလုံးနဲ့တယောက် ဇာတ်ကားရိုက်နေပါတယ် :D
ဒီလိုပါပဲ ဇာတ်ကားတစ်ခုမှာ ဗီလိန်တယောက်တော့ ပါစမြဲပါပဲ..။
ဗီလိန်ဖြစ်လဲ သူက ပျော်နေပုံရပါတယ် etone ရယ်
အဲဒါမိုလို့ online မှာမြဲရိုနေပါတယ်
နွယ်ပင် က ဗေဒင်ဆရာမ လုပ်သင့်တယ် အကြားအမြင်ရလို့
မင်းကို အမေကတင်မကဘူး.. သူများတွေပါဝိုင်းဆဲလို့ ဒီ Site ထဲမှာပါ နေမရဖြစ်တော့မယ်ကိုယ့်လူ..
ဟဟ နေမရတော့မဖြစ်ပါဘူး နေတက်ရင်ကျေနပ်စရာကြီးပါဘဲ
နွယ်ပင်က ဗေဒင်ဆရာမ လုပ်ဖို့နေနေသာသာ ဗေဒင်ဆို မယုံလို့ တစ်ခါမှတောင် မမေးဘူးဘူး
ဒါပေမဲ့ လူကဲခတ်တော့ ကျွမ်းတယ် အခုဆို စာကဲခတ်ပါကျွမ်းလာပြီ ..
ရွာမှာလူစည်ကားလာပေမယ့် KTV နဲ့ ဘီယာဆိုင်နဲ့ နိုက်ကလက်နဲ့ ရှော့ပင်းမောတွေနဲ့ ပန်းခြံတွေနဲ့
အရင်တုန်းကလို ထန်းတောမှာ ထန်းရည်သောက် နေညိုချိန် ရွာထိပ်မှာ အပျိုချောတွေကို ကြည့်ချင်လို့ ခြင်းလုံး ခတ်ချင်ယောင်ဆောင် …. ပန်းခြံဆိုတာလိုဘူး ရွာစပ်က တောထဲကိုသွားရုံပဲ ktv လိုဘူး သူကြီးအိမ်က အော်လန်နဲ့ အော်ဆို … ရွာထိပ်က အပျိုလှလှတွေရဲ့ ကုန်စုံဆိုင်မှာ အကြောင်းမရှိ အကြောင်းရှာ လက်ဖက်ခြောက် ၅ ကျပ်သားဝယ်လိုက် ထန်းလျက် အလကားတောင်းလိုက် ….
ပျင်းလို့ရှိရင် ရွာထဲက အပျိုချောတွေ အတင်းတုတ်တဲ့နေရာ ချောင်းနားထောင် အဲ ဟုတ်ပါဘူး လျှို့ဝှက်သတင်းရယူ …..
အဲ လိုလေးဘဲ နေချင်တယ်
လူများလာပြီး ပြသနာပိုများလာတယ် …. နာတောင်ပို့စ်တင်မယ့် ကိစ္စတွေ ဟိုဖတ်လိုက်ဒီဖတ်လိုက်နဲ့ တင်ဖြစ်တော့ဝူးးးးးးးးးးးး
esz88 ရေ (ညီလေးလား ညီမလေးလားမသိ) အမှတ်တမဲ. ကိုယ့်ရဲ့ အရေးအသားကြောင့် ကိုယ့်ထက် အကြီးတွေ ရေးဖော်ရေးဘက်တွေ ကို စော်ကား ရိုင်းပြသလို ဖြစ်သွားတာ ကို တောင်းပန် ခွင့်လွှတ်ဖို. ပြောရင် အားလုံး နားလည် ပေးကြမှာပါ အခုတော့ ကိုယ်ကလည်းမှားသေး တယ် မထေမဲ့မြင်နဲ့ ပြောင်ချော်ချော်လုပ်နေတော. အပ်နဲ.ထွင်းရမဲ့ကိစ္စ ပိုကြီးသွားမယ်။
ဒီလို့ပဲ ပျော်လို့ နောက်တာပါ ဒါမှ ရွာလူစည်မှာပေါ့
ဟုတ်တာပ…။ ဖတ်နေကြမို့သာ ၀င်ဖတ်နေရတာ ကောမန့်ရေးချင်စိတ်တောင် မရှိလို့မရေးဖြစ်ပါဘူး…။ ဆိုင်ကလည်း အရင်လို စာဝင်ဖတ်ရုံနဲ့ log in ၀င်ရုံနဲ့ ပွိုင့် 20 မရဘူး ဖြစ်နေတယ်… သတိထားမိလား?
Log in ၀င်တာ ပွိုင့်မရတဲ့အကြောင်း အရင်နေ့တွေထဲက သဂျီးကို ပြောထားပါတယ် … သဂျီးထံမှ မည်သည့်အကြောင်းမှ ပြန်စာမလာပါ …. သဂျီးလဲ ဒီရက်ပိုင်း ဘာတွေ ရှုပ်နေမှန်း မသိဘူး …..
ဒီလကတော့ မန်ဘာတွေ တွေ့ ဆုံတာနဲ့သဂျီးသို့ တိုင်စာများနှင့် သာ ပြီးဆုံးတော့မည်လား မသိ
ကိုယ်ပိုင်မူနဲ့ ဦးနှောက်ကိုဖျစ်ညှစ်မှ ထွက်ကျလာတဲ့ စာလုံးလေးတွေကို စာစီသူတွေ အတွက်တော့ စိတ်ပျက်ကျတာပေါ့။ ဘယ့်နှယ် ဆက်တိုက်တက်လာတာတွေ။ စိတ်မချမ်းသာဘူး။ ပင်မစာမျက်နှာမှာ စံမြန်းခွင့် တ၇က်တောင် မရချင်တာမို့ ရေးချင်တဲ့ ဖီးလ်လေးတွေ ပျောက်ပျောက်သွားတယ်။
မှီပြောသလိုပဲဖြစ်နေတယ် … စိတ်ပျက်နေတာတော့ အမှန်ပဲ …
ကိုယ်လုပ်စရာကိုယ်လုပ် အကြိုက်အတွေ့ရင် ၀င်မမန်းနဲ့
ကိုယ်ကြိုက်တာ ကိုယ်ရေးခွင့်ရှိတယ် သူများကိုတော့ထိခို်က်အောင်မရေးသင့်ဘူး။
သူကြီးကိုလဲ တိုင်ခွင့်ရှိတယ် မနေနိုင်ရင်တော့ သူဖြေရှင်းပေးပါလိမ့်မယ်နော်
သူကြီး ဟုတ်တယ်နော် အခုရက်သူကြီးလဲ ဆံပင်ဆေးဆိုးရလိမ့်မယ်ထင်ပါရဲ့
သူကြီးကရိပ်သာဝင်နေတာနေမှာ အမရဲ့ကြောင်ကြီးမရှိတော့ ကြွက်တွေသောင်းကျန်းတာပေါ့
နဲ.သင့်တော်မယ့်စည်းကမ်းလေးများလဲထုတ်ပါဦးတော့လား။သဂျီးက သူဂျီးမို.လို.ပါ။ :D :D :D
အန်ကယ်ကြီး အကြံပေးသလိုမျိုး ကိုယ်မကြိုက်ရင် ဖတ်ပြီး မမန့်ပဲ ကျော်သွားလိုက်ရင် အဲဒီပိုစ့်က တက်မလာတော့ဘူးပေ့ါ။ အဲဒါဆို မျက်စေ့နောက် သက်သာသွားတာပေ့ါ။ တချို့ကလည်း ကော်မန့်တက်လာတာတွေကို ကြည့်ပြီး ဖတ်ကြတာ ရှိတယ်။
esz88 fri ရေ တိုက်ခိုက်တာကိုလဲစိတ်မ၀င်စားနဲ့ သတင်းရေးဖို့သာစိတ်ဝင်စားပါ။ ခင်လို့ပြောတာပါနော်…..
esz88 ရေ …ကိုယ့်အကိုတွေ၊ အမတွေ၊ ဦးဦးတွေ၊ ဒေါ်ဒေါ်တွေ ကို မတိုက်ခိုက်ပါနဲ့လားဗျာ….
ရွာသဂျီးသို့ အကြံပေးစာကနေ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ရွာဆူတော့မယ်ထင်တယ်။ စိတ်ညစ်တာပဲ။
အပြောမတတ်တော့ ဆဲသလိုဆိုတာမျိုး ဖြစ်နေပါပြီ ။ ရွာသဂျီသို့ အကြံပေးစာကနေ ရွာဆူတာမဟုတ်ဘူးဟ … အဲကောင်ပတ်ရမ်းနေလို့ ရွာဆူနေတာနဲ့ အကြံပေးစာရေးရတာ … သိပီလား ။
ဒေါ်အိတုံဂျီး ပြောပုံဂ ..
အမှန်ဒွေဂို ဒဲ့ဒိုးဂျီးကို ပြောချသွားဒါဘဲ ..
ဒါနဲ့ သဂျီး ဒီပို့စ်ကို ဖတ်ခဲ့မိဘူးလား မသိ …
ဒီတခါတော့ သေချာပေါက် ဖတ်ဖြစ်တော့ မှာပါ …
သူ့မယ် အဖြေတခုတော့ ရှိနေတာများလား …
ရွာဆူမှ ရွာစည်တယ် အယူရှိလေသလား…
မသိတော့ဘူး ကိုအံစာရေ ….။
အားတော့နာပါတယ် …. တနှစ်ကျော်က ပို့စ်အဟောင်းကြီးဖြစ်နေတာမို့ ….. ကော့မန့် ပိတ်လိုက်ပါတယ်နော် ။ အခု အခြေနေနဲ့ အဲ့ဒီတုန်းက အခြေနေတူသလောက်နီးပါးရှိပေမယ့် … ၊ သက်ဆိုင်သူက သပ်သပ်ဆီမို့ပါ ။